Ingabe ufuna ukwazi ukuthi yini iphedi? Leli gama laqanjwa ngo 1988 Ngaphambi kwalokho, kwakukhona amadivayisi ngokuthi trackball kanye trackpoint. Futhi phambi kwabo, isikhombisi ilawulwa igundane.
Isisekelo design trackball ibhola, kuyafana igundane lokukhanda. Old mechanical igundane uhamba ecansini ekhethekile, ibhola iphuma ngaphakathi ngokuthinta inzwa, isiginali ekhiqizwa esishukumisela isikhombisi esikrinini. Kodwa ngemva kwamahora athile igundane, wenza kanjalo uyokuqonda ukuthi - hhayi ukhetho ekahle kunazo. Ngakho-ke, nabaqambi kukhuphukele ngedivayisi elilandelayo ukulawula isikhombisi - trackball (igundane noHezekeli). Ball trackball ogibele phezulu noma ohlangothini, eduze izinkinobho ezimbili ezibekwe njengasezulwini igundane evamile. Palm lisesemandleni etafuleni, bese ukuhambisa kuphela isithupha, cranking ibhola trackball. Ibhola kungaba phakathi kuka-1 kuya ku-6 cm ububanzi. Kube trackballs isakhiwo lapho ibhola ilawulwa ne Inkomba, maphakathi noma indandatho umunwe. On onobuhle eminingi (ngaphandle izinkinobho amabhola) usethe isondo umqulu. Inzuzo enkulu trackball - the baxhashazwe izandla ngesikhathi esihlakaleni. Ukujikeleza ibhola ngomunwe wakho ukunika positioning ngokunembe kakhudlwana isikhombisi. Kodwa trackball has ethile sina - evulekile phezulu, ngokushesha kakhulu kuba singcoliswe. Ngaphezu kwalokho, Mechanics iyona Mechanics kanye namadivayisi awayindwayo kangako kuka nozakwabo electronic. Ngemva trackball uvele trackpoint. Siqukethe inzwa ezimbili resistive olushintsha ukumelana layo ngaphansi isenzo amabutho isicelo nalokho (uhlobo Izikali). Ukuhambisa isikhombisi senziwa ngokuhambisana amandla osetshenziswayo. Trackpoint has izinkinobho ezimbili ezifana izinkinobho igundane. I yokuntula zale divayisi kukhona drift isikhombisi kanye nesidingo acindezele panel, okuyinto emva ukusetshenziswa isikhathi eside kungaholela imisipha spasm esandleni.
Ukuthuthukiswa izindlela lobuchwepheshe control touch kuye kwaholela phuzu Is lowo ashila ithuba ukudala isizukulwane esisha kudivayisi ukulawula isikhombisi ikhompyutha. ngakho-ke sasingekho Iphedi yokuthinta. Cabangela lokho iphedi (futhi ke indlela usebenza). Iphedi usebenza ak njengendlela ezivamile touch inkinobho: opharetha othinta umunwe-sensitive (sezinzwa) indawo, uqeda i wesifunda kagesi, kanye inkinobho kucushwa. Kamuva, umunwe phathelana kuvale circuit kagesi, futhi ukuqala kwakhe ukusebenzisa endaweni touch pad ukushintsha umthamo isikhala (nomlilo electronic inkinobho wesifunda). Ngakho touch pad kwaba yisisekelo iphedi. Apple nkampani uthenge ilayisensi ebusweni inzwa we umsunguli akasilaleli kuphela uthinte, kodwa futhi ukuhamba umunwe. Ngemva ukuklanywa cwaningo zobuchwepheshe (ngo-1994) kwakukhona iphedi e-computer aphathwayo. Nokho, wabizwa ngokuthi isiqeshana sokuhambisa iminwe (ngakho ababizela ngaphakathi Apple futhi namanje).
Iphedi has eziningi eziwusizo:
- ibekwe ku umklamo notebook, akudingi isikhala eyengeziwe uNkulunkulud;
- akudingi a surface flat (like igundane);
- nokwethenjelwa of zobuchwepheshe futhi mechanical akazidluli;
- ikhono belingisa ngokucindezela noma iyiphi inkinobho igundane;
- the ukunyakaza okuncane ngaphansi umunwe ihamba isikhombisi esikrinini;
- it has ukuvikeleka okuhle emelene uthuli futhi umswakama.
I yokuntula yilezi:
- isixazululo ongaphakeme futhi (nobunzima ukusebenza ihluzo izinhlelo);
- akusebenzi uma usebenzisa ipeni lomsizi noma ipeni;
- akasabeli nge endaweni encane touch;
- kanye njalo ezinyangeni ezimbalwa idinga ukuhlanzwa touch pad.
Iphedi ku-laptops asetshenziswa kabanzi kakhulu, ngoba elakhelwe kubo. Touchpads eminyakeni yamuva laptops hhayi kuphela ukunikeza olulodwa futhi double ukuqhafaza igundane, kodwa futhi Ukuphenya mpo futhi enezingqimba. Abanye baze babone touch of iminwe eziningana, ngisho ukuthinta: izithombe Zungezisa noma isithombe uyakekela (umbhalo) ngeminwe emibili. Ivame setha ngezansi ikhibhodi (phakathi), kanye has izinkinobho ezimbili ezingokomzimba igundane. Kube touchpads, ikhipha ezimele kusukela laptop, njengoba igundane connectable (nge isixhumi wire, noma nge radio).
Manje ngoba sewuyazi ukuthi uyini iphedi.
Kungasebenti kuyinto amile - kuzwakala engenathemba. Kodwa ingabe kunjalo ngempela konke scary?
Ukuphepha kukagesi ekhaya lakho - phansi cottage